Qalabka IPhone | Wararka IPhone (Bogga 6)
PowerMe waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka qaadatid iPhone-kaaga qalab Android ah
Ma jeceshahay inaad ka qaadatid iPhone-kaaga aaladda Android? Tani waxay noqon kartaa suurtogal mahadsanid PowerMe.
Black Friday 2015, dalabyo aan la diidi karin oo aadan seegi karin
Waxaan ku tusineynaa heshiisyada Jimcaha ee ugu wanaagsan si aad u hesho qalab ka kooban iPhone iyo alaabooyinka kale ee Apple qiimo dhimis Miyaad seegaysaa?
Sawirka VR: kiiska iyo muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah ee iPhone 6
Mashruuc cusub ayaa hadda ku yimid Kickstarter kiis ah, marka lagu daro ka ilaalinta iPhone-gaaga naxdinta, wuxuu isku daraa muraayadaha dhabta ah
Apple wuxuu joojiyaa iibinta Kevo iyo Ogosto qufulka
Apple ma sii iibin doonto qufulka la'aan HomeKit
Ka ilaali iPhone-gaaga adigoon si dhib leh lagugu ogaan Just Mobile TENC iyo AutoHeal
Waxaan ku falanqeynay ilaaliyaha shaashadda AutoHeal iyo kiiska TENC ee ka socda Justo Mobile, ilaalinta oo leh saameyn yar oo muuqaal ah.
iRig Acoustic, Macruufka Gitar Mikrofoonka Acoustic-ka ee Ugu Horeeya Hada Laheli Karo
Microphone-ka loo yaqaan 'iRig Acoustic Microphone', 'iPhone', 'iPod' ama '' Iprophone '' ah oo loogu talagalay gitaarka acoustic, ayaa hadda loo heli karaa iibsi.
Waxaan kuu soo qaadaneynaa liiskan wanaagsan ee sameecadaha dhagaha ee Bluetooth oo ku habboon Apple TV si aad uga faa iideysato.
Miyuu yahay ilaaliyaha muraayadda kulul ee iPhone u qalantaa?
Waxaan u sharaxeynaa faa'iidooyinka ay leeyihiin ilaaliyayaasha muraayadaha muraayadda u ah iPhone ama mobilada. Miyay u qalmaan?
Nimbus oo ka socda SteelSeries. Dib u eegista xakamaynta MFi ee ay bixiso Apple ee ku xigta Apple TV 4
Markii aan u soconay inaan soo iibsano Apple TV 4, Apple waxay na siisaa kantaroolaha SteelSeries Nimbus iyo, sidee bay noqon kartaa haddii kale, waa kan dib u eegista.
Runtastic Moment Classic, falanqaynta saacaddan oo leh hawo xiran
Waxaan tijaabinay Runtastic Moment Classic, oo ah saacad si xarrago leh loo qaabeeyay oo leh kiis bir ah iyo xaddiga waxqabadka.
Qalooca, iPhone 6 kiiska aan biyuhu xirin oo naxdin u leh
Falanqaynta kiiska Love Mei Curve ee loogu talagalay iPhone-ka oo leh aluminium xagga hore ah, muraayad gorilla ah iyo kahortagga ugu badan ee biyaha, naxdinta iyo boorka.
Baqbaqaaqa ayaa ka furanaya dukaankiisii ​​ugu horreeyay ee ku meelgaar ah gudaha Spain magaalada Barcelona
Baqbaqaaqa ayaa furaya dukaankiisii ​​ugu horreeyay ee ku meelgaarka ah ee Isbaanishka ee La Maquinista, halkaas oo aan ku tijaabin karno buugyaraha alaabada koowaad, oo ay ku jiraan drones
Xiaomi Mi Scale ilaa imtixaanka, ma u qalantaa?
Falanqaynta Miisaanka Miisaanka Xiaomi ee leh Bluetooth oo ku habboon iPhone iyo Android. Mudan? Qiimaheeda waa mid aad u xiiso badan.
Premium One W3, saldhig u ah dhammaan qalabkaaga
Saldhigga lacag bixinta ee loo yaqaan 'Premium One W3' ee loo yaqaan 'Enblue Technology' ayaa ku siinaya awood aad ku dalbatid ilaa 3 aaladood isla waqtigaas, oo ay ku jiraan Apple Watch-kaaga.
Belkin wuxuu soo bandhigayaa Charge Dock ee iPhone iyo Apple Watch
Belkin wuxuu soo bandhigay Charge Dock, soo jeedintiisa ah in laga qaado iPhone iyo Apple Watch isla qalab.
Philips wuxuu bilaabay Hue Bridge 2.0 oo ay weheliso taageerada HomeKit
Ballanqaadku waa deyn oo Philips wuxuu maanta bilaabay Hue Bridge Bridge cusub ee cusub ee cusub ee loo yaqaan 'HomeKit'.
Cinder, shaashad gaar ah oo qaybteeda ah
Cinder waa ilaaliye shaashad ah oo ka samaysan Gorilla Glass kaas oo la jaan qaadaya geesaha qalooca ee shaashadda iPhone 6, 6s, 6 Plus iyo 6s Plus
Withings iyo qiyaasta smart, sharad aamin ah
Withings waxay na siisaa cabir caqli badan oo naqshad wanaagsan leh iyo waxqabad ku eg kaamil
Kiisaska ugu fiican ee iPhone 6 iyo iPhone 6s
Waxaan ku tusineynaa daboolida ugufiican si aad uga difaaci karto iPhone 6-kaaga iyo 6-da aad kaga soo horjeedaan dhicitaan ama dharbaaxo suuragal ah inay hesho.
Dib u eegista kiiska Just Mobile AluFrame ee na siiya kiis aluminium tayo sare leh si loo ilaaliyo qaybaha ugu jilicsan ee qalabkeena.
Netatmo, waa heerkulbeeg heer sare ah oo lagu ilaaliyo isku xirka gurigaaga
Netatmo waxaa ka go'an inay ka soocnaato Nest dhinacyada qaarkood laakiin waxay haysaa howlaha ugu xiisaha badan
Belkin's WeMo wuxuu keenaa internetka waxyaabaha loogu talagalay Nalalka LED-ka
Belkin wuxuu ku sharraxaa WeMo si uu u soo dhigo nalka internetka ee waxyaabaha gurigeenna
Laba iyo toban South BookBook, oo ah kiiska ugu sarreeya ee iPhone-kaaga
Laba iyo toban South BookBook ee iPhone 6 iyo 6 Plus waa kiis in naqshadeynta, tayada iyo dhammeystirka ay kugu kalifayso inaad jacayl ku dhacdo maalinta koowaad
Kiisaska iPhone 6 waxay ku habboonaan doonaan iPhone 6s
IPhone 6s iyo 6s Plus waa toban meelood meel milimitir ka weyn iPhone 6, laakiin taasi kaama hor istaagi doonto qalabku inuu ansax noqdo.
Muraayadda IPhone 6 oo loo dhigay wax ka yar $ 12
Qalabka VicTsing iPhone Lens wuxuu na siiyaa muraayadaha indhaha oo dhameystiran oo ka yar $ 12.
Apple waxay soo bandhigeysaa qalab cusub oo la imaan doona iPhone 6s
Apple ayaa shalay soo bandhigtay qalab cusub oo la imaan doona iPhone 6s. Kiisaska cusub iyo qalabka cusub ee lagu rakibo ayaa ku imaan doona midabbo lamid ah kan iPhone
Netatmo wuxuu soo bandhigayaa anemometer kaa dhigaya iPhone-kaaga saldhig cimilo yar
Netatmo wuxuu soo bandhigayaa anemometer loogu talagalay iphone iyo taleefannada kale ee casriga ah kaas oo kuu oggolaanaya inaad si toos ah uga maamuli karto deegaanka mobilkaaga.
Just Mobile's AluFrame Leather Case for iPhone 6 wuxuu isku daraa naqshadeynta, ilaalinta iyo qalabka wanaagsan
Baqbaqaaq Zik 2.0, sameecadaha dhagaha ee wireless-ka ee kuwa kale jeclaan lahaayeen
Waxaan ku tijaabinay sameecadaha dhagaha la ’ee iPhone, Parrot Zik 2.0, oo lagu xakameyn karo barnaamijka iPhone. Soo gal oo wax walba ogow
Runtastic Moment, oo ah saacad xarrago u leh kuwa doonaya inay kormeeraan waxqabadkooda
Ku duub hawl maalmeedkaaga Runtastic Moment, oo ah saacad naqshad casri ah oo la yaab leh madax-bannaanideeda.
Dib-u-eegista Fiidiyowga: Waxaan iska-caabinta LifeProof u qaadnay imtixaanka annaga oo leh iPhone 6 Plus
Kiiska Lifeproof wuxuu adkaysi u yahay biyaha, dhibcaha iyo boodhka. Waxaan u gelinay imtixaanka
Waxaan tijaabinay maqalka maqalka ee HB-8A Bluetooth
Falanqaynta dhagaha maqalka ee Audiomax HB-8A oo u taagan isku xirnaantooda Bluetooth iyo ismaamul ilaa 19 saacadood
Dib u eegista kuhadalka Veho 360 M6 oo leh naqshad gadaal ah
Waxaan tijaabinay kuhadalka 'Veho 360 M6 Bluetooth' kaas oo kaa dhigi doona inaad jeclaato naqshadeeda retro, jirka aluminium iyo codka tayada leh.
Waxaan tijaabinay gawaarida Aukey gawaarida, khamaar aamin ah
Waxaan ku dhiirannay inaan falanqeyno saddexda gaari ee Aukey gawaarida, si raaxo leh ayaan ula yaabnay natiijooyinka.
My iPhone ugu dambeyntii wuxuu leeyahay kiis waana kan
Kiiska Exoframe ee Laut ayaa lagula talinayaa iPhone 6-gaaga
Star Trek Isgaarsiinta Bluetooth, riyada wixii Treki ah
Bisha Janaayo 2015, qalab Bluetooth ah oo ka farxi doona taageere kasta oo Star Trek ah ayaa la iibin doonaa qiimo aan aad u hooseyn.
Maanta waa Amazon's Premium Day, ku raaxayso dalabyadan ku saabsan qalabka iPhone-ka
Soo ogow qalabka ugu fiican ee iPhone iyo iPad marka la bixiyo maalinta Amazon Premium Day. Kaliya inta lagu jiro Julaay 15, 2015.
GoPro Hero4 Session lammaane weyn oo aad iPhone
GoPro wuxuu soo bandhigayaa nooc hoos u dhacay oo ah Hero4, kulanka Hero4, oo cabirkiisu yahay 50% miisaankiisuna 40% ka yar yahay qaabkii hore
Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa kuwaas oo ah xulashooyinka ugu fiican ee aan uga difaaci karno iPhone 6-kaaga biyaha
Miyaad xiisaynaysaa sawir qaadista iyo fiidiyowga? Salaan dheh Studio Olloclip
Olloclip wuxuu kuu soo kordhiyey qalab cusub iPhone-kaaga, kanna ma seegi kartid.
Falanqaynta ku hadla Clint FREYA oo leh isku xirnaanta Bluetooth, batteriga gudaha iyo tayada codka oo kaa yaabin doona.
Ma rabtaa in kamaradaada iPhone ay yeelato 20,2 MP? Isku day DxO One
DxO One waa qalab si toos ah ugu xira iPhone-kaaga wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad hesho sawiro ilaa 20,2 MP xal ah.
Falanqaynta kiiska Mophie Juice Pack Air for iPhone 6 oo leh batari gudaha ah oo ah 2.750 mAh si loo hagaajiyo ismaamulkeeda
Olloclip wuxuu soo bandhigayaa Lens Firfircoon oo loogu talagalay iPhone 6, xagal ballaaran iyo telephoto hal
Olloclip wuxuu soo bandhigay Lens Firfircoon, muraayadaha keena muraayadaha balaaran iyo muraayadaha telephoto ee iPhone 6 si loo hagaajiyo sawiradeena
Halo Back waxay badhanka "gadaal" u keentaa iPhone-ka
Thanks to Halo Back waxaan ku lahaan doonnaa badhanka dhabarka dhiniciisa suulka xiga bidix badhanka Guriga.
Kani waa kiiska Ollocase si loogu isticmaalo Olloclip-ka iPhone 6 adigoon ka saarin kiiska ilaalinaya.
Mophie waxay soo saartay baytar sheeganaya inuu laba jibaarayo ismaamulka isla markaana ka dhigaya iPhone 6-ga aan biyuhu xirin oo aan u adkaysan karin shahaada IP68
GE wuxuu diyaariyaa qaar ka mid ah nalalka LED-ka ee la jaan qaada Apple HomeKit
Dhawaan waxaan awoodi doonnaa inaan ka xakameyno nalalka casriga ah ee casriga ah iPhone-ka iyada oo si gaar ah loo hagaajinayo tayada jiifka.
Cube: a pirojektar pico ah oo si isku dhafan u leh iPhone-kaaga
RIF6 Cube waa borojekti awood-sare leh oo raad yar kujira. Kaliya laba inji waxay awood u leedahay inay soo bandhigto 120 "sawirro qeexitaan sare leh
Amazon waxay na siisaa xadhigiisa hillaaca MFi qiimo aad u jaban
Amazon waxay bilaabeysaa fiilooyinkeeda danab 2 mitir oo u gaar ah iyada oo ay la socoto shahaadada MFi qiimo aad uga hooseeya xadhiga ay Apple na siiso.
popSLATE wuxuu kuu keenayaa shaashad labaad shaashadda (aan waxtar badan lahayn) iPhone-kaaga
popSLATE waa shaashad labaad ee iPhone 6 ah oo kuu oggolaan doonta inaad ku aragto nooc kasta oo sawir ah shaashadda hoose ee E-ink
SanDisk iXpand, waxaan ku tijaabinay xasuusta banaanka ah iPhone-ka
Falanqaynta SanDisk iXpand xasuusta dibedda ee iPhone iyo iPad, ballaarinta GB-ka aaladda Apple.
Zero G, kiiska ka-hortagga cuf isjiidka ee doonaya inuu beddelo usha selfie-ga
Waxay u abuuraan kiiska ka hortagga culeyska ee iPhone 6 kaas oo u oggolaanaya inuu ku xirnaado meel kasta oo dusha ka mid ah isagoo aan hoos u dhicin
Hal-abuurnimo Woof 2 Dib-u-eegista Afhayeenka Bluetooth
Dib u eegista kuhadalka hal abuurka 'Woof 2' oo leh Bluetooth iyo shaqo gacmo-la'aan ah oo kugu cajab galin doonta tayada codkeeda iyo xarakaadkeeda.
Dib u eegista sameecadaha Aurvana In-Ear3 Plus dheeri ah
Dib u eegida sameecadaha dhagaha sameeya ee loo yaqaan 'Aurvana In-Ear3 Plus' oo la jaan qaada iPhone-ka kuwaas oo lagu garto tayada codkooda qiimo macquul ah.
Hue Go, laambadaha cusub ee Philips LED ee ku habboon IOS
Kuwaani waa Philips Hue Go, nalalka cusub ee Philips wireless-ka ah ee aan ku xakameyn karno iPhone-ka.
Fitness band Xiddiga 21 dib u eegista
Waxaannu gelineynaa jijimaadda jimicsiga ee Oaxis Star.21, kuwani waa gunaanadkeenna ku saabsan jijin kaa caawinaysa inaad ku guuleysato nolol firfircoon.
Ka saarida kooxda jir dhiska ee Star21
Star.21 waa jijin caqli badan oo ku dhiirrigelisa waxayna kaa caawineysaa inaad ku noolaato nolol caafimaad iyo firfircoon.
Waxaan tijaabinay batariga Intocircuit ee 11.200 Mah Mah
Falanqaynta batteriga Intocircuit Power Bank oo leh awood dhan 11.200 mAh iyo laba dekedood oo USB ah si loogu soo celiyo iPhone-ka dhowr jeer.
Griffin wuxuu ku dhawaaqayaa deked si loogu soo dallaco iphone iyo Apple Watch
Griffin WatchStand waa meel lagu xayiro Apple Watch iyo iPhone habeen kasta, isla markaana soo ogow sida muuqaalkani u eg yahay.
Waxaan ku tijaabinay 'Olloclip' iphone 6: fisheye, xagal balaaran iyo macro
Waxaan awoodnay inaan ku tijaabinno Olloclip-ka iPhone 6 iyo 6 oo lagu daray, oo ah qalab ku darsanaya kalluumeysi, xagal ballaadhan iyo laba macros oo ah iPhone-kaaga.
SanDisk iXpand, IOS Memory External Memory Hada Waxay Siisaa 128GB
Ku dar awood dheeri ah iPhone-kaaga ama iPad-kaaga oo leh 128GB SanDisk iXpand xasuusta dibedda ah oo waligaa marna ha u dhammayn boosaska sawirradaada, fiidiyowyadaada ama muusikada mar labaad.
HTC Grip, oo ah iPhone-socon GPS tracker waxqabadka
Macluumaadka iyo astaamaha HTC Grip, jijin waxqabad ku habboon iPhone iyo Android.
Sida ugu badan ee looga faa’iideysan karo saacaddaada Dhagax-jeex
Waxaan ku tusineynaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo Pebble Smartwatch-kaaga iOS-ka iyada oo loo mahadcelinayo jebinta fiidiyowga gaaban ee ka yar 10 daqiiqo
Sida loo isticmaalo kantaroolkaaga PS3 ee ku jira iPhone-kaaga
Waxaan ku tusineynaa sida ugu habboon ee aad ugu adeegsan karto kontoroolkaaga PS3 inuu ku ciyaaro iPhone-kaaga mahadnaqa barnaamijkan iyo Cydia
Popsicase, kiiska iPhone-ka ee ku yimaada ul sawir leh
Popsicase waa kiis iPhone 6 ah oo leh ul-ku-dhejis isku-dhafan, oo ku habboon in sawirro laga qaado nafteena iyada oo aan loo baahnayn taageero dheeraad ah.
PWR, kiis iPhone ah oo leh batteri iyo gidaar isku mar isku mid ah
Kiiskan batteriga ah hubaal waan iska illoobi doonaa fiilooyinka, maaddaama ay leedahay isku xira si ay ugu xirto awoodda ku jirta.
Apple ayaa cusbooneysiisay xirmada safarka waxayna hoos u dhigeysaa qiimaheeda
Qalabka Apple Adapter Travel wuxuu cusbooneysiiyay si uu wax uga beddelo oo uu u joojiyo bixinta 30-pin ee adabbaraha USB qiimo dhimis.
Dib u eeg Seismik 6, kiiska iPhone-ka ee soo baxa
Seismik 6 iyo Architek waa astaanta astaanta Lunatik ee ilaalinta naxdinta leh, moodooyinka gelitaanka iyadoon la mid ahayn TakTik Extreme.
Haddii aad jeclaan Lahayd Mustaqbalka, tani waa kiiskaaga iPhone 6
Kiiska xiisaha leh ee iPhone 6 kiiskii ugu xiisaha badnaa ee dib u soo noqoshada mustaqbalka
Kani waa kiiska NueVue ee loogu talagalay iPhone 6, ka ilaali mobilkaaga marwalba mid nadiif ah lana ilaaliyo
Falanqaynta kiiska NueVue ee loo yaqaan 'iPhone 6' oo ka samaysan maqaar Napa ah iyo ilaalin antimicrobial ah oo moobiilku ka ilaaliyo bakteeriyada.
Mattel si ay u bixiyaan muraayadaha xaqiiqda dalwaddii la jaan qaadi kara iPhone
Mattel iyo Google waxay soo bandhigi doonaan View-Master, oo ah muraayad dhab ah oo dhab ah oo loogu talagalay iPhone-ka oo adeegsan doonta tikniyoolajiyadda loo isticmaalo Google Cardboard VR.
Phorm, kiis kaa dhigi doona inaad si dhakhso leh ugu qorto iPhone-ka
Kani waa Phorm, kiis loogu talagalay iPhone iyo iPad oo leh nanofluids oo u oggolaanaya kumbuyuutarka jirka in lagu soo bandhigo dusha sare ee shaashadda.
Qalabka ugu fiican ee iPhone ee aad siin kartid Maalinta Jacaylka
Waxaan kuu soo qaadaneynaa liistada badeecooyinka ugufiican ee aad maalinta Jacaylka siin karto kuwa jecel kuwa casriga casriga ah ee tufaaxa qaniinay.
Kontrollerkayaasha All waxay kuu ogolaanayaan inaad isticmaasho ilaaliyeyaashaada Dualshock si aad ugu ciyaartid iPhone-kaaga macruufka 7 ama iOS 8 adigoon si xad dhaaf ah ugu qarash gareeyn mashiinka MFi fog.
Vitastiq, iPhonekeenu wuxuu u lebisan yahay sidii dhakhtar
VitaStiq waxay u oggolaaneysaa iPhone-kaaga inuu cabiro heerarka fitamiinada iyo macdanta si aan faro-gelin iyo gebi ahaanba xanuun la’aan ugu yaraan $ 99.
Qanjaruufo VR, xaqiiqda dalwaddii ku jirta iPhone-kaaga
Qanjaruufo VR waa nidaam dhab ah oo dhan-in-mid xaqiiqada dalwaddii qaab qarsoodi ah qaab kiiska for our iPhone, oo leh nidaam xakamaynta multi-tilmaam cusub.
Dib u eegista batariiga Aukey 8000 mAh
Falanqaynta Aukey Power Bank 8000 mAh baytariga, badeecad kaa hor istaageysa inaad ismaamulku kaaga dhamaado iphone, ipad ama aalad kale.
Sida loo ilaaliyo Hillaacaaga ama MagSafe-kaaga
IVY waa ilaaliye fudud oo wax ku ool u ah fiiladaada danabka ama MagSafe, qalabkan uma baahna inaad iibsato fiilo cusub.
Madluun, ilaalin aan muuqan
Dareen la'aan waa buufin aan la arki karin oo awood u leh inuu ka ilaaliyo iPhone-kaaga biyaha iyo xoqida, si buuxda ayaa loo adeegsadaa, waxaa lagu sifeeyay IPX7.
Falanqaynta xakamaynta Moga Rebel, markay la ciyaarayaan iPhone waxay qaadanayaan heer cusub
Review of Moga Rebel joystick la jaan qaada macruufka oo kuu oggolaan doona inaad u rogo iPhone-ka meel la qaadan karo oo la qaadan karo.
Xirashada dharka ee 'Misfit' waxay la falgeli karaan barnaamijyo iyo qalabyo kala duwan
Misfit Shine iyo Flash wearables waxay awoodi doonaan inay la falgalaan adeegyada iyo aaladaha sida Spotify, IFTTT ama heerkulbeegga Nest si loo wanaajiyo fursadahooda
Moment Case, kiiskii iPhone 6 ee loogu talagalay dadka jecel sawir qaadista
Moment wuxuu bilaabayaa kiis iPhone 6 ah oo leh xajin iyo badhan loogu talagalay sawir qaadista
Runtii ma u baahan tahay dacwad aad ku difaacdo iPhone-kaaga?
Suuqa qalabka iyo gaar ahaan kiisaska iPhone ayaa sii kordhaya. Laakiin kiis run ahaantii lagama maarmaan ma aha in la ilaaliyo taleefankaaga?
Isbarbar dhig mugga afhayeenka dhammaan iphone-ka. Ma qiyaasi kee baa fiican?
In kasta oo mararka qaarkood isbarbardhigyadu ay yihiin wax xun, maanta ayaa kaa caawin doonta inaad ogaato iPhone-ka uu la yimaado mug weyn codkiisa.
Waxay soo saaraan iPhone 6 dhererkiisu ka badan yahay 30.000 mitir
Muuqaal laga soo duubay sida iPhone 6 loo tuurayo in ka badan 30.000 oo mitir oo dherer ah, oo dhulka ku dhacaya laakiin ka badbaaday dhabarjabkii dhib la'aan
Apple wuxuu faahfaahinayaa qeexitaannada isku xiraha danabka dumarka
Apple waxay faahfaahin ka bixineysaa sida isku xiraha danabka uu noqon doono sida kuwa soo saarayaasha qalabka ee iPhone iyo iPad ay awoodi doonaan inay bilaabaan adeegsiga alaabtooda.
Crown, ilaaliyaha shaashadda ee iPhone 6 oo leh qaab aluminium ah
Taajku waa ilaaliye shaashad muraayad ah oo shidan oo loogu talagalay iPhone 6 kaas oo sidoo kale la socda qaab aluminium ah si loo ilaaliyo qalooca muujinta.
Kuwani waa xirmada cusub ee Mophie Juice ee loogu talagalay iPhone 6/6 Plus [CES 2015]
Mophie wuxuu soo bandhigay qaar ka mid ah kiisaska cusub ee iPhone-ka kuwaas oo na siin doona batteri badan oo dheeri ah haddii loo baahdo.
Lifeproof sidoo kale wuxuu leeyahay kiiskiisa biyuhu iyo batteriga ee iPhone 6
Lifeproof Fre Power waa kiiska batteriga ee iPhone 6 kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku quusin karto saldhigga Apple qoto dheer laba mitir hal saac.
Reach79, waa kiis ballan qaadaya inuu hagaajinayo daboolka iPhone 6
Kiiska Reach79 ee iPhone 6 wuxuu ballan-qaadayaa inuu hagaajinayo caymiska taleefanka Apple si aad u habaysan.
Zagg wuxuu soo bandhigayaa kiis iPhone ah oo leh qalabka Bluetooth iyo batari dheeri ah
CES 2015 ayaa nooga tagtay alaabooyinka sidan oo kale ah: iPhone 6 kiiska oo labanlaabmaya sida batteriga iyo kan ku hadla Bluetooth.
Kani waa kiiska batteriga cusub ee Otterbox ee iPhone 6 [CES 2015]
Shirkadda qalabka ka samaysata iPhone-ka ayaa noo soo bandhigtay kiis leh batari ku dhex jira 2600 mAh.
Alcatel Watch, smartwatch ah macruufka iyo Android
Alcatel wuxuu noo keenayaa smartwatch u gaar ah, kaas oo la jaan qaadi doona labada nidaam ee hawlgalka waaweyn ee suuqa, qaabka dhabta ah ee Pebble.
Withings Activité Pop, oo ah saacad raqiis ah oo leh awooda quantizer
Withings Activité Pop waa saacad ay la socoto bilicsanaanta dhaqanka ee ilaalisa hawl maalmeedkeenna si ay noo siiso tirakoob laga helo iPhone-ka.
IPhone 6 ilaaliyaha shaashadda ayaa ka ilaalin doona xoqida oo ka ilaalin doona foorarka
Waxay soo saaraan ilaaliye muraayad ah oo muraayad u ah iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus kaas oo ilaaliya shaashadda kuna daraya iska caabin dheeraad ah si aysan u foorarsan
Baqbaqaaq RNB6, waa qaate cusub oo loo yaqaan 'CarPlay' oo loogu talagalay gaarigaaga
Baqbaqaaq RNB6 waa qaate cusub oo la jaan qaadaya CarPlay iyo Android Auto oo lagu soo bandhigay CES 2015 waadna ku rakibi kartaa gaarigaaga.
Seagate wuxuu soo bandhigayaa Memory-ga la jaan qaadi kara wireless-ka
Seagate wuxuu soo bandhigayaa wadis adag oo wireless ah oo leh WiFi, batteri lana jaan qaada iPhone iyo iPad.
Nambarada SwitchEasy: kiiska miisaaniyada midabada leh ee iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus
Tirada qalabka ee loo heli karo iphone ayaa kusii kordhaya suuqa. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadleynaa tirooyinka SwitchEasy, oo ah xulasho midab leh oo raqiis ah.
Shan docks yar oo weyn si aad uga qaadatid iPhone 6 ama 6 Plus
Waxaan kuu soo qaadaneynaa waxa aan u maleyno inay yihiin dock-yada ugu fiican ee laga qaado iPhone-yada cusub ee 6 iyo 6 Plus.
IPhone 6 horeyba wuxuu u leeyahay adabtarada dualSIM
U Beddelashada iPhone 6 oo loo beddelayo terminal dualSIM ah ayaa suuragal ah adabbar kuu oggolaanaya inaad ku isticmaasho laba kaar mobilkaaga Apple.
Tilmaamaha Hadiyadaha Kirismaska ​​ee iPhone
Tilmaam hadiyadaha kirismaska ​​ee ugu fiican iPhone-ka, u hel fikradaha hadiyado la xiriira mobilada Apple-ka 2014.
COBI, ka dhig baaskiilkaaga mid caqli-gal ah qalabkan loogu talagalay iPhone-ka
COBI waa qalab loogu talagalay iPhone-ka oo keenaya nalalka LED-ka ee caqliga leh baaskiilkeena wuxuuna diiwaangeliyaa dhammaan noocyada tirakoobyada waxtarka leh ee baaskiil wadista.
IPow 3200 Dib u eegida Batariga
Dib u eegista IPow 3200 batteriga dibedda leh oo leh labo dekedo USB ah iyo 3.200 Mah Mah si ay kuugu soo dallacdo iPhone-kaaga, iPad-kaaga ama mobiil ama qalab kale.
Xiaomi Mi Band ayaa horeyba ula jaanqaadi jiray iPhone-ka
Jijimadda Xiaomi, Xiaomi Mi Band ayaa horay u laheyd codsigeeda la jaan qaada iPhone-ka Apple Store Store.
Waxaan dib u eegeynaa kiiska Speck CandyShell ee iPhone 6 [muuqaal]
Waxaan dib u eegnay kiis cusub oo iPhone 6 ah, Speck CandyShell, kaas oo naga caawin doona inaan ka ilaalino iPhone-kayga dhacdooyinka maalinlaha ah.
Bixinta aragtida habeenkii ee iPhone waa suurtagal kiiskan
Kiiska NVC ee iPhone 6 wuxuu siiyaa taleefanka Apple aragti habeen, meel loogu talagalay gelinta kaararka xusuusta microSD iyo batteri gudaha ah oo dheeri ah.
#SoloSelfie: Tani waa sida Apple ugu dhawaaqdo Beats Solo2
Tani waa ogeysiiskii ugu horreeyay ee shirkadda Beats tan iyo markii ay iibsatay Apple. Waxaan ku baxaa magaca #SoloSelfie waxaanan horumariyaa Beats Solo2.
Waxaan ku tijaabinay kiisaska Difaaca Otterbox iPhone 6 (difaac aad u daran)
Waxaan dhammaantiin kuu sheegeynaa mid ka mid ah kiisaska difaaci doona iPhone 6 kaaga ugu badan, Difaaca Otterbox.
Pinć waa muraayadihii ugu horreeyay ee xaqiiqda dalwaddii adeegsada iPhone 6 iyo dareemayaal xagga cirka ah si ay nooga dhigaan sidii filimkii Warbixinta Dadka laga tirada badan yahay
SanDisk iXpand, xusuus kale oo dibadeed oo la jaan qaada iPhone iyo iPad
SanDisk iXpand Flash Drive waa xusuus dibadeed oo loogu talagalay iPhone iyo iPad oo leh ilaa 64 GB si loo kaydiyo sawirrada loona ciyaaro fiidiyowyada xitaa qaab MKV ah
Apple iyo Beats waxay soo bandhigaan sameecadaha dhagaha la ’ee Solo2
Apple wuxuu soo bandhigayaa wireless cusub Beats Solo2 oo tirtiraya jiritaanka xarigga iyadoo ay ugu wacan tahay isku xirnaanta Bluetooth.
iBridge, waa qalab kale oo ballan qaadaya inuu kordhin doono xusuusta iPhone-ka
iBridge waa xusuus dibadeed oo loogu talagalay iPhone iyo iPad oo ballan qaadaya inay kordhin doonaan xusuusta laga heli karo aaladaha Apple.
SoundBlaster Roar, sameecad la qaadi karo oo ay ka go'an tahay tayada codka
Falanqaynta hadalka ku hadla Hal-abuurka, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan xagga tayada codka iyo xulashooyinka isku xirnaanta.
Jawbone wuxuu soo bandhigayaa Raad-raacyo Waxqabad Cusub oo iPhone ah
Jawbone Up3 iyo Jawbone Up Move ayaa ah curcurka cusub ee cabiraya si loo cabiro howlaheena maalinlaha ah loona xakameeyo duubista xogta laga helo iPhone.
FitBit waxay soo bandhigeysaa noocyadeeda cusub ee la gashado, oo ay ku jiraan saacadda GPS
Fitbit Charge, Charge HR iyo Surge waa dharka cusub ee la gashado oo duuba hawl maalmeedkeena oo ku darsada suurtagalnimada haysashada qalabka garaaca wadnaha iyo GPS.
Waxaan tijaabinay Baqbaqa Boodka Sumo, oo ah diyaarad Drone ah oo awood u leh inay ku boodo ilaa 80 sentimitir
Falanqaynta Baqbaqaaqa Jumping Sumo drone, aalado aad ka maamuli karto iPhone-kaaga, iPad-ka ama Android-ka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku booddid ilaa 80 sentimitir.
Otomaatiga guriga, albaabka guriga ku fur taleefankaaga iPhone
Dhammaanteen waxaan u baranay isticmaalka aaladda fog si aan gaariga u furno, qaarkoodna xitaa kaarka dhawaanshaha si aan u bilowno, ...
AMPY, ku cusbooneysii qalabkaaga dhaqdhaqaaqaaga
AMPY waa batari banaanka ka ah qalabkaaga mobilada oo dib ugu soo celiya dhaqdhaqaaqaaga
LUNATIK wuxuu soo bandhigayaa kiisaska TAKTIK 360 iyo AQUATIK ee iPhone 6
LUNATIK waxay soo bandhigeysaa kiisaska ilaalinta sare ee iphone ee loogu talagalay isboortiga iyo xirfadaha halista badan, kahortaga boodhka, biyaha iyo dhicitaanka la xaqiijiyay.
PowerDrive, keyd USB ah iyo xeedho loogu talagalay iPhone iyo iPad
Carl Zeiss wuxuu ku dhawaaqay VR One, muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah ee la jaan qaada iPhone 6
Carl Zeiss wuxuu bulshada ugu soo bandhigay VR One, muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah ee adeegsada shaashadda iPhone 6 ...
Powerslayer, xeedho xariif ah oo loogu talagalay AppleK HomeKit
Powerslayer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si caqli gal ah uxirato aaladahaaga maadama ay joojiso lacag bixinta markay meertadu dhamaato, kana fogaato saamaynta taagan.
Shoulderpod, xajin u ah iPhone 6 PLus
Shoulderpod S1 waa qalabka ugu horreeya ee noocyo badan oo loogu talagalay maqalka moobiilka, wuxuu leeyahay saddex hawlood oo aasaasi ah, waa mid sahlan oo la qaadi karo oo sahlan in la isticmaalo.
$ 5 bilyan oo doolar si looga ilaaliyo ilmahaaga inuu lumo
Shirkad ayaa isku dayeysa inay ku soo bandhigto nalka caruurtooda suuqa taas oo ka hortageysa inay lumaan, qiimaha waa mid la awoodi karo laakiin wuxuu u baahan yahay bulsho
Isticmaalayaasha amar ku bixiyay kiisaska rasmiga ah ee maqaarka ee iPhone 6 ama iPhone 6 Plus ayaa bilaabay inay ku qaabilaan guryahooda, kuwa silikoonada ahna ma aysan helin.
Apple Hogs Laydh Xidhiidhiyeyaasha waxay ka tegayaan soosaarayaasha qalabka iyaga la'aanteed
Baahida weyn ee loo qabo iPhone 6 waxay ku qasbeysaa Apple inay sameyso malaayiin fiilooyin hillaac ah, taasoo ka dhigeysa kuwa sameeya qalabka ay ka dhamaadaan.
Logitech K480: kumbuyuutar lagu qoro iPhone, iPad iyo Mac isla waqtigaas
Maanta waxaan mar kale ka hadlaynaa aaladaha qalabka Apple waxaanan tixraaceynaa Logitech K480: kumbuyuutar lagu qoro iPhone, iPad iyo Mac isla waqtigaas.
bKey: batari la qaadan karo oo aad ku qaadan karto qalabkaaga muhiimka ah
Waxaa jira qalab badan oo adduunka Apple ah, in kasta oo in yar ay awood u leeyihiin inay na siiyaan batteri la qaadan karo oo yar oo raaxo leh sida bKey.
Sida lagu sheegay falanqeyn ku saabsan Motherboard-yada xayirmay ee labada nooc ee iPhone 6, ayaa la shaaciyay inay isku dari karaan qalabka NFC ee teknoolojiyada wireless-ka ah.
Waxa caafimaadku nagu siiyo iOS 8
Caafimaadka wuxuu u adeegaa sidii meel lagu kaydiyo dhammaan macluumaadka la xiriira caafimaadka ee ay soo ururiyaan iphone, codsiyada, iyo agabyada kale.
Hal-abuurka Muvo Mini: waa ku-hadalka Bluetooth-ga yar ee aan biyuhu karin
Waxaan tijaabinay hal abuurka cusub ee loo yaqaan 'Creative Muvo Mini', oo ah mid yar oo la awoodi karo, isla markaana ah qalab buluug ah oo biyuhu ku xirmaan
Omate X, smartwatch kale oo la jaan qaada iPhone-ka
Adduunyada 'smartwatch' waxay sii waddaa inay si tartiib tartiib ah u kordhiso buuggeeda, iyadoo siineysa beddelaad dhameystiran oo dhaqaale leh increasingly.
IWatch-Ready Health and Fitness Sensor Headphones
IWatch waxay u badan tahay inuu kacaawin doono xilligii dadka la gashado. Xaaladdan oo kale waxaan aragnaa inay horayba u jireen moodallo samaacado sameecado leh oo dareemayaal caafimaad iyo caafimaad diyaar u ah.
Abuur kiiskaaga iPhone alwaax u gaar ah oo leh Casetify
Casetify waxay noo ogolaaneysaa inaan u sameysano kiisaska alwaax ee shakhsi ahaaneed ee iPhone
Dib u Eegista Kiiska iPhone Rearth Ringke Fusion
Xaaladdan oo kale waxaad ka ilaalin doontaa aaladdaada naxdinta maalin kasta adigoon arkin bilicsanaanta iPhone-ka oo gurracan.
WOOFit, ku hadla ugu awooda badan ee la qaadi karo muusikadaada
Waxaan ku faraxsanahay tijaabinta WOOFit, oo ah jiilka soo socda ee la qaadi karo oo iga yaabiyay labadaba hawlgalkiisa iyo tayada maqalkiisa.